के सेक्सको लत पनि समस्या हो ? - kshreereshwornath
के सेक्सको लत पनि समस्या हो ?
माघ २७, २०७६, ५:५७ PM
धनुषा, ०७६ माघ २७
अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेनको एक कथन प्रचलित छ, ‘चुरोट छोड्न सजिलो छ, जुन काम मैले सयौं पटक गरे ।’ यद्यपि निकै सजिलो पनि छैन जति भन्न सजिलो छ । तर, पछि उनको मृत्यु फोक्सोको क्यान्सरबाट भएको थियो । एकतर्फ समाजले निकोटीन, रक्सी र ड्रग्स जस्ता नसालु पदार्थको लतलाई स्वीकारेको छ । हामीले यी पदार्थबाट हुने हानीलाई पनि स्वीकार गरेका छौं । तर, सेक्सको लतको कुरा गर्दा विशेषज्ञहरूको नै राय बाझिने गरेको छ ।
सेक्स विरामी होइन । तर, यसको विषयमा थुप्रैले चिकित्सकीय परामर्श लिएका छन् । जसको कुनै डाटा नै छैन । पोर्न र सेक्सको लतबाट ग्रसित मान्छेको मद्दतका लागि विकसीत गरिएको वेभसाइटले ब्रिटेनमा २१ सय मान्छेमाथी सर्वे गरेको थियो । यीनिहरूले २०१३ साल पछि वेभसाइटमा सहयोगका लागि सम्पर्क गरेका थिए । यसरी सहयोग माग्नेमा ९१ प्रतिशत पुरुष छन् । जसमा दश जनाले मात्र आफ्नो समस्याका बारेमा चिकित्सकसँग परामर्श लिएको बताएका थिए ।
सेक्सको लत २०१३ को ‘डाइग्नोस्टिक एन्ड स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल अफ मेन्टल डिसअडर्स’ (डिएसएम) मा समावेश गर्ने बताइएको थियो । तर, प्रमाणको अभावमा सामिल गरिएको थिएन । डिएसएम अमेरीका र ब्रिटेनमा एक अहम डाइग्नोस्टिक टुल हो । तर, अब कम्पल्सिव सेक्शुअल बिहेवियर (बाध्यकारी यौन व्यवहार) लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका तर्फबाट जारी हुने ‘म्यानुअल इन्टरनेशनल क्लासीफिकेशन अफ डिसीज’ (आइसीडी) मा शामिल गर्ने कुरामा बिचार गरिँदै छ ।
नयाँ प्रमाण सामु आएपछि तास खेल्ने लत र बढी खानेको तललाई पनि २०१३ मा बिरामीको रुपमा स्वीकार गरिएको थियो । पहिले तासलाई बाध्यकारी व्यवहार पनि मानिएको थियो । थेरापिस्टका अनुसार सेक्सको लत यस्तै लतमा सामिल हुन सक्छ ।
दिमागले के सोचिरहेको हुन्छ ?
एक शोधका अनुसार सेक्सको तलको शिकार भएका मान्छेले पोर्न फिल्म हेर्दा उसको दिमागमा पनि यस्तै गतिविधि खेलिरहेका हुन्छन् । जस्तो कुनै नसाको लत भएको मान्छेको दिमागमा नसाकै बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् । कुनै व्यक्तिमा सेक्सको लत छ छैन भनेर यस कुरामा निर्भर गर्छकी तपाईले कुन कुरालाई तलको रुपमा लिनु भएको छ । ओपन युनिभर्सिटीमा एमेरिटस प्रोफेसर डा. फ्रेडरिक टोएट्स भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो कुनै चीज छ जुन शारिरीक रुपमा निर्भर छ । जसलाई छोड्दा शरीरमा चोट पुग्छ । तब सेक्स लत हुन सक्दैन ।’
डा. टोएट्स भन्छन्, ‘कुनै पनि लतका दुई पहिचान हुन्छन् आनन्द या रिवार्डको चाहना । यस व्यवहारको आसपास संघर्ष हुनु । विशेषज्ञका अनुसार प्रतिफलको चाहना नै लतलाई बाध्यकारी व्यवहारबाट अलग गर्न सक्छ । तर, दुबैमा निकै समान्ता छ ।
प्रोफेसर टोएट्स भन्छन्, ‘लतका शिकार भएका मान्छेमा अल्पकालिन फाइदा देखिन्छ तर, यसले दिर्घकालिन असर ज्यादा पार्ने सम्भावना हुन्छ । यसका विपरीत बाध्यकारी व्यवहार (ओब्सेसिव कम्पल्सिव डिसअडर्स) बाट प्रभावित मान्छे यस्तो व्यवहार पनि गर्छन् जसबाट उनीहरूलाई कुनै आनन्द प्राप्त हुँदैन ।’ आनन्दको चाहना हामी सबैमा हुन्छ ।
मनोवैज्ञानिक डा. हैरियट गौराड मान्छिन् की कुनै व्यवहार तब तल बन्न पुग्छ जब त्यो तिब्र हुँदै आफ्नो आसपासका व्यक्तिलाई असर गर्न पग्छ । उनले तास खेल्नु र अधिक खानुलाई पनि लतको बिरामी मानिएको बताइन् ।
डा. अबिगेल सान मेडिकल साइकोलोजिस्ट हुन् । उनी सेक्स सम्बन्धी व्यवहारको पनि लत हुने कुरालाई मान्छन् । तर, जो मान्छे मनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर हुने समस्याको सामना गरिरहेका छन् उनका लागि सेक्स कुनै अरु लुकेको समस्याका कारण हुनसक्छ । जस्तो चिन्ता र आघातबाट मुक्ति पाउनका लागि सेक्सको साहरा लिँदा यो लत बन्न सक्छ ।
के सेक्सको लत मिठो कल्पना हो ?
धेरै मान्छेले सेक्सको लतलाई एक वास्तविक विरामीको रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । ‘द मिथ अफ सेक्स एडिक्शन’ किताब लेख्ने सेक्स थेरापिस्ट डेविट लेख्छन्, ‘आम रुपमा सेक्सको लत मानिने व्यवहार मुड र कुन्ठासँग जोडिएका समस्याको उपचार नगर्नेमा हुने लक्षण हो ।’
उनी भन्छन्, ‘सेक्स या हस्तमैथुनलाई दारु वा ड्रग्सको जस्तो नसाको लिनु सहिनहोला । दारुको लत भएका मान्छे यसलाई छोड्दा मर्न पनि सक्छन् । सेक्सको लतको धारणा स्वस्थ यौन सम्बन्ध कस्तो छ यससँग जोडिएको नैतिक मूल्यमा आधारीत हुन्छ ।’
यदि तपाई थेरापिस्टको धारणा भन्दा धेरै र फरक ढंगबाट सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई थेरापिस्टको नजरमा सेक्सको तलको शिकार हुन सक्नु हुन्छ ।
इन्टरनेश्नल क्लासिफिकेशन अफ डिसिजको अघिल्लो अंकमा कम्पल्सिव सेक्शुअल बिहेवियरलाई सामिल गर्दै लेखेको शोधपत्रमा शोधकर्ताको एक समूहले यो तलबाट बच्नु पर्ने तर्क अघि सारेको छ । उनीहरूका अनुसार ‘सेक्समा अत्याधिक रुची राख्नु वा व्यवहार देखाउनु यौन इच्छाका बारेमा नैतिक निर्णय या सेक्सको इच्छा अस्वीकार गर्ने कुरामा कुनै इजलास गर्नु आवश्यक छैन ।’ साभार : www.healthpostnepal.com
लक डाउनमा बलिउड सेलिब्रिटीहरु यसरी दिन विताउँदैछ
मेकअप बिनाका पाँच बलिउड अभिनेत्री
महामूर्ख सम्मेलनमा सम्मानित १४ व्यक्तिहरुले पाएको मानपदवीसहितको फोटो फिचर